भृकुटीमण्डपबाट माधव नेपालले भने– ‘यो कास्टिङ मात्रै हो, फिल्म त बाँकी नै छ’Main Samachar
भृकुटीमण्डपबाट माधव नेपालले भने– ‘यो कास्टिङ मात्रै हो, फिल्म त बाँकी नै छ’
९ माघ २०७७, शुक्रबार १६:१३ प्रकाशित
नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आजको प्रदर्शन कास्टिङ मात्र भएको भन्दै फिल्म सुरु हुन बाँकी नै रहेको बताएका छन् । काठमाडौंमा गरेको शक्ति प्रदर्शनलाई भृकुटीमण्डपमा सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले भने–‘शुक्रबारको प्रदर्शनमा जनआन्दोलनको झल्को देखिएको छ। तर यो कास्टिङ मात्रै हो । फिल्म सुरु हुन बाँकी नै छ ।’
अध्यक्ष नेपालले ओलीको कदमप्रति दण्डित शुरु भएको समेत बताएका छन् । अध्यक्षबाट हटाउनुका साथै साधारण सदस्यबाट किन नहटाउने भनेर स्पष्टीकरण सोधिएको बताए । आफू भर्खर सुर्खेतबाट आएको भन्दै अध्यक्ष नेपालले भने, ‘उहाँले कतै मैले गल्ती गरेँ भनेर पत्र पो पठाएको छन् कि ? म पनि संसद पुनस्स्थापनाको आन्दोलन सहभागी हुन्छु भन्नु भएको छ कि ? मैले हाम्रा नेताहरुलाई सोध्न पाएको छैन ।’
विप्लव नवलपुरबाट सार्वजनिक, काठमाडाैं जाँदै